Inona no toerana fialantsasatra tadiavin'ny Amerikanina amin'ny 2021?
Home » Lahatsoratra farany farany » Fanavaozana ny tanjon'ny dia » Inona no toerana fialantsasatra tadiavin'ny Amerikanina amin'ny 2021?
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Hospitality Industry • Vaovao • Resorts • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Miaraka amin'ny ezaka vaksiny efa manomboka hivoaka manerantany, betsaka ny mpanao fialantsasatra manantena ny hidona amin'ny làlana indray amin'ny 2021
Ny fahalianan'ny fikarohana an-tserasera momba ny 'fialan-tsasatra 2021' dia nitombo hatramin'ny faran'ny volana oktobra 2020
Mampiasa ity fotoana ity ny olona hikarohana ny fialan-tsasatr'izy ireo tamin'ny 2021
Ny fikarohana vaovao dia mamaritra ny toerana fialan-tsasatra tadiavin'ny Amerikanina amin'ny 2021
Ireo mpanao fialantsasatra any Etazonia sy manerantany dia tsy maintsy niato ny diany tamin'ny taona 2020 sy 2021 noho Covid-19. Na izany aza, amerikana maro no efa mijery ny fanantenana amin'ny ho avy.
Raha ny filazan'ireo manam-pahaizana momba ny indostria, izay nanao fikarohana momba ny angon-drakitra Google Trends, dia nitombo be ny fahalianan'ny fikarohana an-tserasera momba ny 'fialan-tsasatra 2021 hatramin'ny faran'ny volana oktobra 2020.
Mazava ny fahitana fa mampiasa ity fotoana ity ny olona hikarohana ny fialan-tsasatr'izy ireo tamin'ny 2021.
Mba hahitana ny toerana kendrena nofinofy indrindra tamin'ny 2021, dia nandinika ireo firenena malaza indrindra ho an'ny mpandeha amerikana ireo mpandalina ary avy eo nanadihady ny angon-karoka momba ny fikarohana Google momba ny fitomboan'ny fahalianana manerana ny volana oktobra, novambra ary desambra 2020.
Mba hametrahana ny salanisan'ny fahalianan'ny karoka isam-bolana amin'ireo toerana fialan-tsasatra, dia nikaroka tany Etazonia ireo mpikaroka ireo teny hoe "Fialan-tsasatra any [toerana]".
Ny firenena eropeana italie sy Greece dia misongadina miaraka amin'i Mexico, Canada, ary Karaiba ho firenena manana zanabola karoka indrindra amin'ny 2021.
Ho an'ny drafitra amerikana fitsangatsanganana rehetra dia misy lalàna vaovao manan-kery amin'ny 26 Janoary izay mitaky ny mpandeha rehetra mihoatra ny 2 taona hamokatra ratsy Covid-19 valim-panadinana natao tao anatin'ny telo andro lasa izay hiondrana an-tsambo tany Etazonia Na mila mampiseho porofo ny mpitsangatsangana fa sitrana tamin'ny virus tao anatin'ny telo volana lasa.
Ireto ny dimy amin'ireo toerana itadiavana be indrindra izay mampiasa angona fikarohana Google rehefa azo antoka ny dia izao:
Fialan-tsasatra any Italia
I Italia dia voa mafy tamin'ny areti-mifindra coronavirus, saingy nitombo indray izany tamin'ny taona 2020 mba ho lasa iray amin'ireo toeran-kaleha be mpitady indrindra any Etazonia. Italia dia nanomboka fanentanana fanaovana vaksiny izay natomboka tamin'ny des 2020, ary efa nihoatra ny vaksiny 1 tapitrisa izy ireo izao! Raha izao no mitohy, dia maminavina isika fa ho lasa mora kokoa ny dia ary hanomboka hanamaivana ny fameperana midika izany fa ho an'ny fahavaratra 2021, Italia dia mety ho safidy mety.
Fialan-tsasatra any Gresy
Toy ny ankamaroan'ny Eropa amin'izao fotoana izao, i Greece dia mijanona tsy voafetra ho an'ny Amerikanina. Na izany aza, ny toerana itobiana Mediteraneana malalaky ny taniny majika sy ireo nosy manonofinofy miparitaka amoron-tsiraka dia tena tian'ny mpizahatany amerikana. Toy ny any amin'ny toerana 2021 rehetra, makà torohevitra amin'ireo maso ivoho sy manam-pahaizana momba ny dia, alohan'ny hamandrihana ireo fialantsasatra rehetra. Fa i Gresy kosa dia manintona firavaka voajanahary izay mety ho fanampin-dranomasina tonga lafatra hatramin'ny 2021.
Fialan-tsasatra any Mexico
Ny antony iray mahatonga an'i Mexico hisongadina amin'ity lisitra ity dia ny fisokafan'ireo mpitsidika amerikana azy amin'izao fotoana izao. Ny dia an-habakabaka teo anelanelan'ny firenena roa tonta dia niverina indray volana maromaro lasa izay ary ny zotram-piaramanidina dia nanomboka ny làlana mankamin'ny faritra mpizahatany malaza indrindra ao amin'ny firenena, toa an'i Caribbean Caribbean, Los Cabos, ary Riviera Nayarit, ankoatry ny hafa. Raha ny hita dia mbola mila pasipaoro ny Amerikanina handehanana any Mexico fa tsy mitaky valim-panadinana COVID-19 ratsy mba hidirana.
Fialan-tsasatra any Karaiba
Toerana itodiana malaza, ny ankamaroan'ny nosy Karaiba dia nisokatra indray ho fizahan-tany, miaraka amina protokol hiarovana ny mpitsidika sy ny mponina manohitra ny COVID-19. Ny nosy sy ny toerana tsirairay dia samy hafa kely amin'ny protokol COVID-19, ka mendrika ny hanohizana ny fikarohana raha te hiala vakansy ianao.
Fialan-tsasatra any Canada
Raha ny fahitana azy, na iza na iza te-handeha ho any Kanada dia tsy maintsy manandrana ny ratsy amin'ny COVID-19, ary ny sisin-tanin'i Kanada / Etazonia dia mihidy amin'ny dia tsy ilaina rehetra. Na izany aza, antenaina hiova izany, ary ny Government of Canada dia nanangana fitaovana vaovao, Travel Wizard, hanampiana ireo teratany vahiny hamantatra raha toa ka afaka mandeha any Kanada izy ireo amin'ny famaliana fanontaniana vitsivitsy vitsivitsy.